Mijoro ny Tpic ao Ivato: ho afa-pahasahiranana ireo zokiolona misotro ronono | NewsMada
Mijoro ny Tpic ao Ivato: ho afa-pahasahiranana ireo zokiolona misotro ronono
Notokanana tamin’ny fomba ofisialy, omaly, ny tranon’ny tahirim-bolam-panjakana ao anatin’ny kaominina Ivato. Toerana hahafahan’ireo zokiolona eny an-toerana mandray ny fisotroan-drononony io toerana io. Hanampy ireo kaominina manodidina ihany koa amin’ny fitantanam-bola, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra, Ramarosata Herintsoa.
Hatramin’izay, tsy maintsy mandeha maraina vao mangirandratsy ireo zokiolona milahatra eny Ambohidratrimo haka ny vola fisotroan-drononony. Miaritra ny hatsiaka, ny haizina sy ny tahotra amin’ny tsy fandriampahalemana, izy ireo amin’izany.
“Raha miainga amin’ny 3 ora maraina eny Ivato, laharana faha-200 aho rehefa milahatra eny Ambohidratrimo”, hoy Ratovonony, zokiolona misotro ronono. Nahafaly azy ireo, araka izany, ny fisian’ity fotodrafitrasa vaovao ity.
Ho an’ny kaominina manodidina kosa, hitovy, manomboka eto, ny fitantanana ny volam-panjakana amin’izy ireo. Hitovy ihany koa ny fanaraha-maso ny tetibolan’izany kaominina izany. Manampy amin’ny teknika ireo kaominina ireo no hataon’ny sampana tahirim-bolam-panjakana ao an-toerana.